Harley Street Hip Replacement Archives - Harley Street Clinic London ပုဂ္ဂလိကစမ်းသပ်ဆေးရုံများ
ဒီတော့ကိုခေါ် “အဆိပ်သင့်” တင်ပါးဆုံရိုး implants ဂျွန်ဆင်အားဖြင့်ရောင်းချခဲ့ကြပြီ & ဂျွန်ဆင်လက်အောက်ခံ, Depuy ။.
ဂျွန်ဆင်အားဖြင့်ပြည်တွင်းကောက်ယူတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု & ကထက်ပိုမိုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်မတိုင်မီဂျွန်ဆင်မကြာမီကစိတ်ပူပန်တင်ပါးဆုံရိုး implants ပြန်ပြောပြပြီးနောက်ကုမ္ပဏီလုံလောက်စွာထုတ်ကုန်ရဲ့အလားအလာအန္တရာယ်များကိုအကဲဖြတ်မတွေ့ရှိခဲ့ 90,000 လူနာများ.
ဗြိတိန်နိုင်ငံကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏များတွင်အသုံးပြုအဆိပ်သင့်တင်ပါးဆုံရိုး implants သူတို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအနည်းဆုံးသုံးနှစ်သိတယ်တဲ့ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်, ယနေ့အခိုင်အမာခဲ့သည်.
ဂျွန်ဆင်&ဂျွန်ဆင်လက်အောက်ခံ DePuy စွပ်စွဲသူတို့လူနာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်လုပ်သူရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတဦးပြောပြထိပ်တန်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရှိနေသော်လည်း '' သတ္တု-on-သတ္တု '' တင်ပါးဆုံရိုး implants ကြော်ငြာ.
လူနာရာပေါင်းများစွာယခုတင်ပါးများအတွက်အစားထိုးရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း, အသက်အဘို့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ထားတဲ့, DePuy ရှိနေသော်လည်းစွပ်စွဲအစဉ်မပြတ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးခဲ့သည်ခံရ, အဆိုပါ Daily Telegraph သတင်းစာရဲ့အစီရင်ခံတင်ပြ.
အတော်များများရှိပါတယ် Harley Street, က Hip အစားထိုးဆေးခန်း အဆိုပါချွတ်ယွင်း Depuy တင်ပါးအဘို့အကြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအစားထိုး.